April 2, 2021 - Padaethar
ယောက်ျားများကို ထိန်းနည်း ၄ နည်း
April 2, 2021 by Padaethar
ယောက်ျား များကိုထိန်းနည်း ၄ နည်းရှိသည် ၁. အစားကောင်းများဖြင့်ထိန်းနည်း (အစာအိမ်ကိုထိန်းနည်း) ၂. ပိုက်ဆံ ကိုထိန်းနည်း ၃. လူကိုထိန်းနည်း ၄. မိမိ ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းနည်း ၁. အစားကောင်းများဖြင့်ထိန်းနည်း (အစာအိမ်ကိုထိန်းနည်း) နံပါတ်တစ်နည်းကိုအသုံးပြုသော မိန်းကလေး သည် သဘောထား အဖြူစင်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထို မိန်းကလေး မျိုးကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်သော ယောက်ျား သည် ကံကောင်းသောသူဖြစ်သည်။ သူမသည် သူချစ်သော ယောက်ျား ကို လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူမအတွက် တစ်ခုသောမျှော်လင့်ချက်မှာ မိမိ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားသောအရသာရှိရှိ ….. ထမင်းကောင်း ဟင်းလျှာများကို မိမိယောက်ျား အချိန်မှန်မှန်ပြန်လာစားရန်သာဖြစ်သည်။ ၂. ပိုက်ဆံ ကိုထိန်းနည်း နံပါတ်နှစ်နည်းကိုအသုံးပြုသော မိန်းကလေး သည် လည်လွန်းသောသူဖြစ်သည်။ ငွေသည် ယောက်ျား၏အသက်၊ … Read more
မိန်းကလေး တွေရဲ့ မျက်ရစ်ကို ကြည့်ပြီး ဇနီးကောင်း ဖြစ်နိုင်လား၊ ဖောက်ပြန်တတ်သူ ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာကို ကြည့်လို့ရနိုင်
မိန်းကလေး တွေရဲ့ မျက်ရစ် ကို ကြည့်ပြီး ဇနီးကောင်း ဖြစ်နိုင်လား၊ ဖောက်ပြန်တတ်သူ ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာကို ကြည့်လို့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကဲ မှန်လေး ကို လက်ထဲထားပြီး ကိုယ့်ရဲ့မျက်ရစ် ကို ကြည့်လိုက်နော်။ 1.မျက်ရစ် မျဉ်းနှစ်ချောင်း က မျက်တောင် အစမှာ စုံနေရင် …. ဇနီးကောင်း သူကတော့ လောက ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကို နားလည်ပြီး တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်တည်း ချစ်မြတ်နိုးပြီး တသက်လုံး ပါရမီဖြည့်ပေးသွားမယ့်သူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အပျော်သဘော အချစ်ရေး ကို စဉ်းစားလေ့မရှိပဲ၊ အချစ်ရေး အိမ် ထောင်ရေးကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားသူပါ။ ပါရမီဖြည့်ဘက်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့အတွက် ယောင်္ကျား ဖြစ်သူကလည်း တန်ဖိုးထား လေးစားပါလိမ့်မယ်။ 2.မျက်ရစ် မျဉ်းနှစ်ချောင်းက မျက်တောင … Read more
Categories KNOWLEDGE, ဘဝနှင့်အချစ်ရေးရာ Leaveacomment
အနမ်းအမျိုးအစားပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိပြီး တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကို အနမ်းပုံစံတွေက ဖော်ပြနေပါတယ်။ ချစ်သူနှစ်ဦးနမ်းနေတဲ့ ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့လည်း သူတို့ရဲ့ relationship အခြေအနေနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာနဲ့ အမူအကျင့်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ဒီလိုအနမ်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လှို့ဝှက်ချက်တွေကို Sheril Kirshenbaum ရဲ့ The science of kissing ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ အသေအချာရှင်ပြထားပြီး ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး အနမ်း ၁၈ မျိုးနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံး အနမ်းကဘယ်တစ်ခုဖြစ်မလဲ။ ၁။ The French kiss French kiss ဟာ အနမ်းတွေအားလုံးထဲမှာ ရေပန်းအစားဆုံးနဲ့ စုံတွဲတွေအကြိုက်ဆုံး အနမ်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ French kiss ဟာအနုပညာဖြစ်ပြီးတော့ လူတိုင်း … Read more
အိပ်ယာထဲမှာ မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အချက် ၉ ချက်
အိပ်ယာထဲမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အချက် ၉ ချက် မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ သူတို့နဲ့ အတူအိပ်တဲ့ အမျိုးသားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေရင်ခုန်တက်ကြတယ် ၊ စိတ်ဝင်တစား ရှိကြတယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား ? ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ရင်ဘက်မွှေး အမျိုးသားတွေရဲ. ရင်ဘက်မှာ အမွှေးအမျှင် ရေးရေးလေး ရှိနေတာမျိုးကို ရင်ခုန်တက်ကြပါတယ် ၊ ထူလပျစ်ကြီးမျိုး မဟုတ်ပဲ သန့်ရှင်းတဲ့ အမွှေးအမျှင်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားရင် သေချာပေါက် မိန်းကလေးတွေ ကြွေမှာပါ ။ အမျိုးသားအဂါင်္ကြီးတာကို မနှစ်သက် အမျိုးသား အများစုဟာ သူတို့ရဲ. အမျိုးသားအဂါင်္ကြီးရင် အမျိုးသမီးတွေ နှစ်သက်မယ်လို့ ယူဆထင်မြင်တက်ကြပါတယ် ၊ ဒါဟာ မှားပါတယ် … Read more
မိန်းကလေးတွေ ဝေးဝေး ရှောင်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျားညံ့ ( ၆ ) မျိုး
ဘယ်လောက်တောင်ပဲ လန်းနေနေ၊ မိုက်နေနေ လုံးဝ မပတ်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အနားမှာ ဒီလို လူမျိုးတွေက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအဖြစ် ရှိနေရင် မိတ်ဆွေ ဆက်ဆံရေး အတိုင်းပဲ ထားပါ။ လုံးဝကို ကိုယ့်ဘဝထဲ၊ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲ အဝင်မခံပါနဲ့။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အနေနီးပြီး စိတ်ယိမ်းယိုင် တာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ရှောင်ပါ။ သင် လုံးဝ ရှောင်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျား အမျိုးအစားတွေကတော့… ( ၁ ) ချစ်သူရှိနေပီးသူ ဘယ်လောက်ပဲ လန်းနေနေ၊ တော်နေနေ လုံးဝ ရှောင်သင့်တဲ့ ယောက်ျား အမျိုးအစားထဲမှာ ဒီလို လူမျိုး ပါပါတယ်။ ချစ်သူ ရှိနှင့်နေပြီး ဖြစ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုး ဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ထဲက သဘောကျမိနေနေ လုံးဝ ရှေ့မတိုးပဲ … Read more
သမီးကို သူဆင်းရဲမယူနဲ့လို့အဖေ ဘာကြောင့်ပြောရသလဲဆိုရင်…
ဒီပို့လေးကို တွေ့တဲ့သူတိုင်း ကျော်မသွားပါနဲ့နော်…သူဆင်းရဲကိုမယူနဲ့သမီး သမီး… သမီးကို သူဆင်းရဲမယူနဲ့လို့အဖေ ဘာကြောင့်ပြောရသလဲ…အဲဒီနေ့က သမီးက သမီးချစ်သူကိုအိမ်ခေါ်လာပြီး “အဖေ.. ဒါ သမီးချစ်သူ သမီး သူနဲ့လက်ထပ်မယ်” လို့ ပြောခဲ့တယ်နော်။ နောက်တော့ သမီးကို အဲဒီလူနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ အဖေပြောခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ သမီးမေးတော့ “ဆင်းရဲလို့” လို့ အဖေဖြေတယ်။ အဲဒီတုန်းက အဖေ့ကိုကြည့်တဲ့ သမီးရဲ့အကြည့်ကို အဖေမမေ့ခဲ့ပါဘူး။ သမီးရဲ့အကြည့်ထဲမှာ ငါ့အဖေက ငွေမက်လိုက်တာ၊ ကြီးကျယ်လိုက်တာဆိုတာ ပါနေတယ်အဖေဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ… ကိုယ့်သမီး အထင်လွဲသွားတာလောက် ခံစားရတာ မရှိပါဘူး သမီး.. “သူ ပိုက်ဆံမရှိလို့ပေါ့ ဟုတ်လား.. ဖေဖေ” လို့ သမီးပြန်မေးခဲ့တယ်နော်။ မဟုတ်ဘူး သမီး.. သူဆင်းရဲတာက ပိုက်ဆံဆင်းရဲတာ မဟုတ်ဘူး… သူဆင်းရဲတဲ့အချက် လေးချက်ကို အဖေတွေ့လိုက်တယ်။ ရည်မှန်းချက်ဆင်းရဲတယ်….အဲဒီနေ့က အဖေ့ရှေ့မှာ သမီးတို့ရပ်နေတဲ့အချိန် … Read more
သင့်ရဲ့အချစ်တွေကို ချစ်သူကဘယ်လောက်အထိ တန်ဖိုးထားသလဲဆိုတာ သိရှိနိုင်မယ့်အချက်များ ကိုယ့်ကို ချစ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ကို ချစ်သူကတန်ဖိုးထားတာကို မိန်းကလေးတိုင်း မျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကပေးလိုက်တဲ့ အချစ်တွေကို သူ့ဖက်က တကယ်ပဲ တန်ဖိုးထားရဲ့လားဆိုတာ တိုင်းတာဖို့အတွက်ကတော့ ခက်ခဲပါတယ် ။ တကယ်လို့ ယခုလိုအချက်တွေသာ သင့်ရဲ့ချစ်သူဆီမှာ မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင် သင့်ကိုသူဘယ်လောက်ထိ မြတ်မြတ်နိုးနိုး တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကို သိရှိနားလည်ပါလိမ့်မယ်နော် ။ ၁။ ဒီကမ္ဘာပေါ်က အခြားယောက်ျားတွေနဲ့ မတူတဲ့အကြည့်နဲ့ သင့်ကိုကြည့်တတ်တယ်” မျက်လုံးဟာ နှလုံးသားရဲ့တံခါးပေါက်တချပ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူက သင့်အပေါ် ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို သိချင်ရင်တော့ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကနေတဆင့် ရှာဖွေ့ဖို့ကို အကြံပြုပေးပါတယ် ။ သူသင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါတိုင်း သင့်ရဲ့နှလုံးသားက ဖော်မပြတတ်တဲ့ နွေးထွေးတဲ့ခံစားချက်တွေကို အလိုလိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင် သူသင့်ကို အရမ်းတန်ဖိုးထားတာ သိသာပါတယ် ။ ၂။ … Read more
ဘယ်တော့မှ ဖွင့်မပြောတတ်ကြပေမယ့် အမျိုးသား ၉၀%ကြောက်ကြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀)ခု
ဘယ်တော့မှ ဖွင့်မပြောတတ်ကြပေမယ့် အမျိုးသား ၉၀%ကြောက်ကြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀)ခု အမျိုးသားတွေမှာ လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါသလား? သူတို့ဟာ သန်မာပြီး ပြတ်သားတတ်ပုံပေါက်ပါတယ်။ “နည်းလမ်းမရှိဘူး” “ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး”ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ မိန်းကလေးများစွာ ပြောခဲ့ဖူးလိမ့်မယ့် အရာတွေပါ။ သို့သော် ဒါက လူ့အဖွဲ့အစည်းက ချမှတ်လက်ခံထားတဲ့ သမားရိုးကျပုံစံသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အမျိုးသားတွေမှာ သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်မှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖွင့်မပြောတတ်ကြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသားအများစု တကယ်စိုးရိမ်တတ်ကြတဲ့ အရာ(၁၀)ခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ ဖွင့်မပြောတတ်ကြပေမယ့် အမျိုးသား ၉၀%ကြောက်ကြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀)ခု.. ၁။ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံ အမျိုးသမီးတွေဟာ ငယ်စဉ်ကစပြီး သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အချိန်တိုင်း ဘယ်လို … Read more
မိန်းကလေး တွေ ပြောကြတဲ့ ယောက်ျား မပီသစေတဲ့ အရာ ….
ဘယ်လို လူမျိုးတွေဟာ ယောက်ျား မပီသဘူးလဲ ဆိုတာ မိန်းကလေး အယောက် ၂၀ ကို မေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဖြေတွေကတော့– ၁. သူ့ရဲ့ ချစ်သူကို မလေးစားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ယောက်ျားမပီသပါဘူး။ ယောက်ျားပီသတဲ့သူ တစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ ချစ်သူကို အလေးထားပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ မထိန်းချုပ်ပါဘူး။ ၂. ယောက်ျားတွေက မျက်နှာပြောင်ရင် ယောက်ျားမပီသတော့ပါဘူး။ ၃. တခြားသူကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချခိုင်းတဲ့၊ ပါတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ခံရတဲ့ ယောက်ျားတွေဟာ ဆွဲဆောင်မှု မရှိပါဘူး။ ၄. အပျင်းထူသူ၊ တက်ကြွမှု မရှိသူ၊ ဦးတည်ချက်မရှိသူ ယောက်ျားတွေဟာ ယောက်ျား မပီသပါဘူး။ ၅. သူတို့ကိုယ် သူတို့ ဘာလိုချင်မှန်း မသိတဲ့ ယောက်ျားတွေဟာ ဆွဲဆောင်မှု မရှိပါဘူး။ … Read more